Tetika telo hamantarana ny efijery AMOLED | Androidsis
Mamitaka hamantatra ny efijery AMOLED
Eder Ferreño | | Android cheat, Tutorials
Nandritra ny taona lasa, Nanjary lamaody ny efijery AMOLED. Zavatra iray izay toa hotehirizina ihany koa amin'ny taona 2018. Avy amin'ny zavatra hitantsika fa mihabetsaka ny mpanamboatra miloka amin'ny fampiasana an'io karazana efijery io. Ny olana dia izao koa misy ny marika milaza fa mampiasa efijery AMOLED, na dia tena tsy toy izany aza ny tena izy.
Izy ireo dia fampisehoana kalitao ambany kokoa, saingy novaina tamin'ny fomba nisehoana fa fampisehoana toy izany. Ka, zava-dehibe ny fahalalana ny fomba hamantarana ny efijery AMOLED rehefa mahita azy isika. Ny tsara dia misy ny tetika hanatanterahana izany.
Hiresaka aminao momba ireo fikafika etsy ambany ireo izahay. Satria izy ireo dia tena ilaina tokoa mba hahafahantsika manavaka amin'ny fotoana rehetra rehefa mahita efijery isika fa tsy azontsika antoka na efijen'ity kilasy ity na tsia. Ka tsara ny mahafantatra ny fomba ahafahantsika mamantatra azy ireo. Vonona hianatra ireo tetika ireo?
1 Fanazavana ny pixel mainty
2 Mijery zoro
3 Fanamafisana loko
Fanazavana ny pixel mainty
Ity no singa malaza indrindra amin'ny fampisehoana AMOLED. Hatramin'ireto karazana efijery ireto dia nanjary malaza tamin'ny fahafahany namono ireo piksely miloko mainty. Noho izany, fomba tsotra iray hamantarana raha tena misy izany dia ny filokana amin'ny fametrahana sary mainty ho valiha. Rehefa nilaza ny sary isika afaka jerentsika raha maty tanteraka ireo teboka. Afaka maka sary ihany koa isika amin'ny alàlan'ny fametrahana ny rantsan-tànantsika amin'ny fakantsary. Ny safidy roa dia manan-kery amin'ity tranga ity.
Raha tsy manome jiro jiro isika, afaka mahazo antoka isika fa tena efijery AMOLED izy. Ka tsy misy tokony atahorantsika amin'izany. Fa raha hitantsika fa manohy mamoaka karazana jiro ny efijery finday, dia tsy misy isalasalana. Azo inoana fa tontonana IPS na LCD io. Ka fomba tsotra be io hahafantarana raha tena izy na tsia.
Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka an'ity karazana efijery ity dia malaza izy ireo satria manana zoro fijery ambany. noho ny haitao hafa misy amin'izao fotoana izao eny an-tsena. Ka zavatra iray hafa izay tsy maintsy raisintsika ary hanampy antsika hahafantatra raha tena efijery AMOLED izy na tsia. Inona no tsy maintsy ataontsika amin'ity raharaha ity?
Noho izany, ny tokony hataontsika dia jereo ny sisinay avy eo amin'ny sisiny. Raha zara raha miova ny loko, na tsy hitan'ny mpampiasa, dia efijery AMOLED marina izy io. Fa raha hitantsika izany manomboka miloko manga ny loko eo amin'ny efijery, avy eo miatrika efijery diso isika. Mety hampiasa teknolojia LED ianao.
Farany, hitantsika ity fikafika tsotra ity izay mandeha tsara ihany koa. Ary koa, toy ny fika roa hafa etsy ambony, tena mora ny manamarina. Amin'ny ankapobeny, ny efijery LED dia mazàna manana loko tototry, na dia misy rindrambaiko manova izany aza. Fa, ny loko fotsy sy maivana amin'ny ankapobeny dia tsy mora novaina. Ka ity dia zavatra afaka manampy amin'ny fanomezana efijery sandoka.
Ny tokony hataontsika amin'izany dia zahao raha mipoitra amin'ny toetrany voajanahary amin'ny endriny mavo kely na tsia eo anelanelan'ny fotsy na mavo ny lamba. Feo somary manahirana ny mamaritra azy, na dia ho hitanao aza izany raha mahita azy ianao. Raha aseho amin'ny feo toy izany ny efijery amin'ny toetrany voajanahary, ka midika izany fa tsy misy fanovana na sivana ao anatiny, avy eo fantatsika fa efijery AMOLED io. Ity dia fomba tsara hahitana, na dia ho an'ny mpampiasa maro aza dia somary sarotra kokoa noho ny roa teo aloha. Noho izany, mety ho ny fijerena ireo fomba hafa no ahazoana aina kokoa aminao ary miala eo alohan'ny fisalasalanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android cheat » Mamitaka hamantatra ny efijery AMOLED
Fampiharana Android ho an'ny finday hamaky ny hafatrao